China Kraft Akwụkwọ guzosie Up obere akpa ụlọ ọrụ na-emepụta | Hong Bang
Kraft akwụkwọ na-ebili obere akpa
mpempe akwụkwọ na-ebili obere akpa bụ ụdị ụdị nkwakọ ngwaahịa kachasị ewu ewu n'ihi na ụdị nkwakọ ngwaahịa a bara uru yana bara uru yana mara mma. Dị ka aha ya na-egosi, akpa ndị a na-enwe ike ebili na elu ọ bụla siri ike. Ọ nwere ikike ngosipụta dị ukwuu ma ha nwere ike ibelata mkpa nchekwa na ịchekwa ohere nchekwa. Ọtụtụ mgbe, a na-ejikarị obere akpa ebili na nri, nri, ọla, tii ma ọ bụ kọfị. Njirimara nke-ebili pouch
a na-arụpụta obere akpa a na - esi na ọtụtụ ihe mgbochi nke ihe mgbochi nwere ike ịkewa ya na ndị isi 3, nke na - ezukọta iji nye obere akpa nwere njirimara na - adịgide adịgide na mgbapu. Ndị otu a bụ:
elu oyi akwa: na-enye ohere obibi nke eserese iji mee, na-ebu mgbasa ozi nke na-ezipụ ozi dị iche iche ma rịọ ndị ahịa.
akwa oyi akwa: na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi na-echebe iji hụ na ọdịnaya nke obere akpa ahụ nwere nchekwa ma dị ọhụrụ.
n'ime oyi akwa: ihe kacha mkpa dị n'etiti atọ. Nke a oyi akwa na-abụkarị fda mma iji hụ na nri dị mma mgbe na-abịa na kọntaktị na nkwakọ ngwaahịa. Ọ dịkwa ọkụ-akara iji mesie ndị ahịa obi ike na etinyeghị akpa ahụ.
obere akpa guzoro na-enyekwa ohere njirimara dị ka zipa, oghere dị elu, akwa akwa na spouts iji welie arụmọrụ nchekwa ya na ogo dị elu ga-abụ ụkpụrụ mbụ anyị. A na-eme ngwaahịa anyị niile site na nri nri nke pụtara na ihe nkiri anyị na-eji, ink na akara nke mmepụta bụ nchekwa 100% maka okenye ọ bụla ọbụlagodi nwatakịrị. Ọzọkwa, anyị siri ike na nke pụtara enweghị nnagide maka ụdị nkwekọrịta ọ bụla na-egosi na nrụpụta siri ike, ikuku ikuku na mbipụta doro anya. Nkwakọ ngwaahịa siri ike na egwuregwu zuru oke na ọchịchọ ndị ahịa ga-abụ ebumnuche anyị.
atụmatụ nke ebili pouch
isi àmà ìhè àmà
leak proof window avaliable n'èzí enyi na enyi vivi imewe reuseable agbanwe ihe
ọkụ dị mfe na obere ọrụ ọ nweghị ike idozi egwuregwu dị mfe iguzo
bpa, lead, pvc, phthalate-free design na ahaziri
nke a bụ ngwugwu hongbang. Anyị na-enye ihe ngwọta nkwakọ ngwaahịa dị iche iche maka mkpa na ngwa dị iche iche. Anyị rụpụta anabata ụdị ọ bụla nke omenala ngwaahịa. Anyị nwere ike ime ka ngwaahịa gị dị iche iche dị ka matte elu, gloss elu ma ọ bụ gosi ha ọnụ na nkwakọ ngwaahịa. Gwa anyị ihe ị chọrọ ka anyị zute ụdị mkpa gị niile. Anyị na-adịghị ịzụlite ngwaahịa na-agbalị ka ụgbọala gị kwupụta ha; anyị na-ege ntị na mkpa gị na injinịa ọhụrụ nke ga-edozi nsogbu gị nkwakọ ngwaahịa.
ọrụ na akwụkwọ ikike anyị nwere ọkachamara ahịa ọrụ otu zaghachi na-edozi ajụjụ n'ime 24 awa. Okwu ọ bụla ga-enwe onye ọ bụla iji hụ na nhazi, oke, ogo na ụbọchị nnyefe ga-adaba na ihe achọrọ. Anyị hụrụ n'anya ịnye ọrụ kachasị mma ma nye ndị ahịa anyị nkwado kachasị.
Nke gara aga: Mbugharị ngwa ngwa maka nri nkwakọ ngwaahịa - Akpa White Akwụkwọ nke obere akpa ala - Hong Bang
Osote: Akpa nri anụ ụlọ